Apple TV - iPhone News | အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple TV သည် iPad နှင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သည့်အရာဖြစ်သည် နှင့် iPad Mini တို့ဖြစ်သည်။ multimedia အကြောင်းအရာအားကြိုးမဲ့ဖြင့်ထုတ်လွှင့်ရန်ဤကိရိယာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်စတီရီယိုနှင့်ဆက်သွယ်သည်။
Apple TV တွင်ပြုပြင်ထားသော iOS ဗားရှင်းတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းသည် protocol နှင့်အတူတူဖြစ်သည် AirPlay, ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောမှန်ဘီလူးကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုခံစားခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗွီတွင်အိုင်ပက်မျက်နှာပြင်ပါအကြောင်းအရာကိုပုံတူပွားပါ Full HD ဤအင်္ဂါရပ်သည်အစည်းအဝေးများတွင်စာရွက်စာတမ်းများမျှဝေခြင်း၊ ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုခြင်း၊ အက်ပလီကေးရှင်းမှဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အိုင်ပက်ဒ်အားဂျော့ခ်ျအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းအတွက်အထူးအသုံးဝင်သည်။
Processor ကိုတပ်ဆင်ထားသည် Apple က A5Apple ၏ set-top box သည်အရွယ်အစား ၂၇၇ ဂရမ်သာရှိပြီး ၉.၈ x ၉.၈ x ၂.၃ စင်တီမီတာသာရှိသည်။
အားလုံး၏အကောင်းဆုံးသည် Apple TV စျေးနှုန်း ဒါက ၉၉ ယူရိုသာပါ။
စပိန်မှာ CODA ကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ (အဲ့ဒါကို Apple TV + မှာ မရှာပါနဲ့)
အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးဆုရှင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ပထမဆုံးရုပ်ရှင်အဖြစ် သမိုင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်...
Apple သည် Touch ID ကို အဝေးထိန်းခလုတ်များထံ ယူဆောင်လာရန် စိတ်ကူးကို မူပိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။
por အိန်ဂျယ် Gonzalez လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
Touch ID သည် စက်လုံခြုံရေးအတွက် ရှေ့နှင့်နောက်ကို အမှတ်အသားပြုသော စနစ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Ana de Armas သည် Apple TV + ရုပ်ရှင် Ghosted တွင် Scarlett Johansson ကိုအစားထိုးခဲ့သည်။
Apple TV + Content သည် Critics Choice Awards9ခု လျာထားခံရသည်။
Apple TV+ ကို စတင်ရောင်းချချိန်မှစ၍၊ ထုတ်ဝေသည့် အကြောင်းအရာအားလုံးအတွက် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းနှင့် ဆုများ စုဆောင်းခံရပြီးဖြစ်သည်။
Apple TV+ သည် Alfonso Cuaron မှ ဒါရိုက်တာ Cate Blanchett ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။
por Karim Hmeidan လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
ခရစ္စမတ်ရဲ့ အဓိကရက်စွဲတွေ နီးကပ်လာပြီဆိုတော့ တော်တော်များများက ရက်အနည်းငယ်လောက် အနားယူနိုင်ကြမယ်…။
Tehran ဇာတ်လမ်းတွဲသည် အကောင်းဆုံးဒရမ်မာအတွက် Emmy Award ကို ရရှိခဲ့သည်။
Apple ဟာ လုံလောက်တဲ့ အာရုံစိုက်မှု မရှိခဲ့ပုံရတဲ့ စီးရီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့...
လူသတ်မှု လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဟာသတစ်ခုဖြစ်သည့် Afterparty သည် Apple TV + တွင် ဇန်နဝါရီ 28 ရက်၌ ပြသမည်ဖြစ်သည်။
တစ်ဖန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာမီ streaming video platform တွင်ရောက်ရှိမည့်နောက်ထွက်ရှိမှုများအကြောင်းပြောရန်ရှိသည် ...
Fraggle Rock စီးရီးကို ဇန်နဝါရီလတွင် ရရှိနိုင်သည်။
Apple ၏ streaming ဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုအတွက် သတင်းကောင်းသည် ပြတ်တောက်မှုသတင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် "Twas the Fight Before Christmas" ၏ ပထမဆုံးနမူနာကို ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Maria Carey ၏နောက်ထပ် Christmas အထူးအစီအစဉ်နှင့်အတူ Apple Tv+ သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ...
Matt Dillon သည် Apple TV + အတွက် High Desert ဇာတ်ကားတွင် Patricia Arquette နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
por Ignatius ခန်းမ လွန်ခဲ့တဲ့7လအတွင်း .
Apple ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက Apple TV+ အတွက် စီးရီးသစ်တစ်ခုကို ကြေညာခဲ့ပြီး High Desert ဆိုတဲ့ စီးရီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့...
iMediaShare ဖြင့် iPad ကို Apple TV မပါဘဲ Smart TV တွင်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဘယ်လိုပြရမလဲ